Liverpool Oo Hoggaanka U Qabatay Saxeexa Xabi Alonso-ha Cusub Oo Ay Real Madrid Ka Doonayaan & Faah-Faahinta Qoddob Heshiis Qabsooma Bur-Burin Kara. - Gool24.Net
Liverpool Oo Hoggaanka U Qabatay Saxeexa Xabi Alonso-ha Cusub Oo Ay Real Madrid Ka Doonayaan & Faah-Faahinta Qoddob Heshiis Qabsooma Bur-Burin Kara.
Kooxda tababare Jurgen Klopp ee Liverpool ayaa lagu soo warramayaa inay haatan hoggaanka u hayso tartankii loogu jiray khadka dhexe ee Real Madrid ee Dani Ceballos isla markaaana ay dalab miiska saartay.
Kubad sameeyaha ree Spain ayaa la filayaa inuu gudaha suuqan iskaga tagi doono Estadio Santiago Bernabeu si ay kooxdiisu iskugu duba rido akoonadeeda kaddib markii ay £300 xilli horeba suuqa galisay.
Dani Ceballos ayaa haatan uun soo dhammaystay waajibaadkiisii xulka Spain ee da’doodu ka yartahay 21 sano jirada waxaana uu kusoo guuleeyay tartanka EURO U21.
Walow aysan aad u wanaagsanayn qaab ciyaareedyadiisii kooxdu ee xilli ciyaareedkani hadana bandhigii layaabka lahaa ee uu kusoo muujiyay tartankii EURO U21 ayaa keenay inuu xiiso ka helo kooxo dhawr ah.
Ceballos ayaa hore loola xidhiidhinayay kooxaha ree England ee Arsenal iyo Tottenham si lamida AC Milan balse Reds ayaa haatan ah kooxda majaraha u haysa tartankiisa sida laga soo xigtay wargeyska Sport.
Liverpool ayaa la fahamsan yahay inay si dhab ah ula dhacsan tahay xiddigan waxaana ay warbixin dhawaan soo baxday sheegaysaa in Klopp uu xiddigan oo lagu naanaysay Xabi Alonso-ha cusub kooxdiisa ku heli karo.
Sport ayaa sheegaya in uu miiska saaran yahay dalab ka yimid dhinaca Liverpool isla markaasna dalabkoodu uu yahay midka ugu xiisaha badan ee ilaa haatan soo gaadhay xiddigan taas oo ka dhigaysa kooxda ugu cad cad.
Real ayaa doonaysa inay gasho wada xaajood ay Ceballos kaga iibinayso Liverpool ama kooxdii kale ee dar dar la timaadaba isla markaana ay ku iibiso lacag 50 Milyan ah oo lagu daray qoddobka ah inay dib ugula soo wareegi karaan lacag intaas ka badan.
Waxa kaliya ee caqabada ku noqon kara heshiis dhex mara labada kooxood ayaa ah in Klopp uusan doonayn xiddig uu horumariyo kaddibna sahal lagu iibsado oo aanu ogolaan doonin qoddoba dib ula saxeexashada.